တုပ်ကွေးကာကွယ်ဖို့ သွေးအမျိုးအစားအလိုက် ဘာတွေစားကြမလဲ - Hello Sayarwon
မိုး အေးတဲ့အချိန်မှာ မျှော်လင့်မထားတဲ့ရောဂါတွေက အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်လာတတ်တယ်နော်။ ဒီလိုဝင်လာတဲ့ရောဂါတွေထဲမှာ ခံရအခက်ဆုံးက ရာသီတုပ်ကွေးပါ။ အချို့သောရာသီတုပ်ကွေးတွေက အသက်သေဆုံးသည်အထိ ပြင်းထန်နိုင်တာကြောင့် ကာကွယ်နိုင်မှ တော်ကာကျမှာပါ။ တုပ်ကွေးရာသီမှာ တုပ်ကွေးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ရာမှာ လိုက်နာရမယ့် အခြေခံအဆင့်တွေက ဘာတွေများလဲ…….
ရာသီတုပ်ကွေးမကူးစက်ခံရအောင် ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကို မဖြစ်မနေလိုက်နာဖို့လိုပါမယ်။
ဒီအချက်တွေထဲကမှ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဖို့ အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားသောက်မှုကို အထိရောက်ဆုံးဖြစ်စေဖို့သွေးအမျိုးအစားအလိုက် တုပ်ကွေးကာကွယ်ဖို့ ဘာတွေစားပေးသင့်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
သွေးအမျိုးအစားအလိုက် တုပ်ကွေးကာကွယ်ဖို့ ဘာတွေစားရမလဲ…….
အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ (ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဟင်းနုနွယ်၊ ကိုက်လန်၊ တရုတ်နံနံ)
နွားနို့ကို အခြေခံထုတ်ထားတဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ
အဆီမပါတဲ့အသား (အမဲသား၊ ဆိတ်သား)
အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ( ဟင်းနုနွယ်၊ ကိုက်လန်၊ တရုတ်နံနံ)
B သွေးပိုင်ရှင်လေးတို့အနေနဲ့ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်
အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ (ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဟင်းနုနွယ်၊ ကိုက်လန်။ တရုတ်နံနံ)
သကြား စတာတွေကို မစားသင့်ပါဘူး။
AB သွေးပိုင်ရှင်လေးတို့အနေနဲ့ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ( ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး)
ကော်ဖီ တို့ကိုတော့ မစားသင့်ပါဘူး။
တကယ်တမ်းတော့ ဒါတွေက သုတေသနတွေ လုပ်ပြီး သေချာအောင် အတည်ပြုဖို့တော့ လိုပါသေးတယ်။ မှတ်ရခက်ရင် အာဟာရရှိတဲ့ အစားအစာတွေကို ရွေးချယ်စားသုံးပါ။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ပူပူနွေးနွေး ချက်ပြုတ်စားသုံးပါ။ ဒါကတော့ လူတိုင်းလိုက်နာသင့်တဲ့ စားသောက်မှုပုံစံပါပဲ။